Samsung Galaxy J5 (2017) သည် BlueBorne အားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update ကိုရရှိသည် Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | Samsung, လုံခွုံရေး
ယခုခဏ အန်းဒရွိုက်သည်အမျိုးမျိုးသော malware များ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုစိတ်ဆိုးစေရန်၊ ဟက်ကာများနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောလူများအားခွင့်ပြုချက်မရှိပဲဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောမည် အပြာရောင်နောက်ဆုံးပေါ် malware တစ်ခု \_ t Android ကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး, သို့သော် IOS, Linux, Windows နှင့် Smarts TV ကဲ့သို့စမတ်ကိရိယာများအတွက်ပါ။
Samsung Galaxy J5 ဟာအားနည်းချက်ရှိခဲ့တယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ malware ဆန့်ကျင်တဲ့လုံခြုံရေး patch မရှိဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ terminal အသစ်အတွက်အသစ်ထွက်တဲ့အတွက်ဒီပြောင်းလဲသွားတယ်။
1 Samsung Galaxy J5 (2017) အတွက် BlueBorne ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
2 BlueBorne - အမြဲတမ်းခြိမ်းခြောက်မှု
3 BlueBorne သည် Android စမတ်ဖုန်းများကိုသာမက၊
Samsung Galaxy J5 (2017) အတွက် BlueBorne ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
သင်သည်သင်၏မွမ်းမံခြင်းမရှိသေးပါလျှင် Samsung ရဲ့ Galaxy J5 (2017)မြန်မြန်လုပ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။
အဆိုပါ update ကို 391,88 mb အလေးချိန် ကျွန်ုပ်တို့ရှိနှင့်ပြီးသားရှိမရှိကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်၊ သွားပါ 'ချိန်ညှိချက်များ' နှင့် 'ကိုယ်တိုင်မွမ်းမံမှုများ'၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်နိုင်မည့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိရမည် အပြာရောင်.
သင်ဆဲမသိလျှင် BlueBorne ဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီ malware ကမင်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်စေနိုင်မလဲ, သင်ညွှန်ပြ site ကိုရောက်ရှိပြီ ကတည်းက Androidsis ပါ, ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဆိုးကျိုးများအကြောင်းသင်ကြားချင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်ဆက်ဖတ်ပါ။
BlueBorne - အမြဲတမ်းခြိမ်းခြောက်မှု
ယခင်ကဒီမှာ Androidsis ပါကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ် အပြာရောင် y သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းဟာအားနည်းချက်ရှိသလားဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
Malware BlueBorne ကို Armis Labs မှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီသည် IoT (Internet of Things) ကိုအာရုံစိုက်သည်။
နောက်ပြီးသင့်ကိုဗီဒီယိုပြပါမယ်။ Armis Labs မှ၎င်း malware ၏ပျံ့နှံ့ပုံနှင့်ပြပုံကိုပြသည်။
ဗွီဒီယိုထဲမှာ၊ အင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်ပေမဲ့အဲဒါကိုတွေ့နိုင်တယ် BlueBorne ၏ပြန့်ပွားမှုအလွန်လွယ်ကူသည်။ Bluetooth ကိုဖွင့်ထားရုံသာလိုအပ်သည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် malware ကိုသတိမပြုမိဘဲလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဒါကကြောင့်ဖြစ်သည် ဘလူးတုသ်ကွန်ယက် Encapsulation Protocol (BNEP) မှလုံခြုံရေးပြissueနာ, devices များအင်တာနက်မျှဝေခွင့်ပြုသည်။
Este လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှု malware ကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ် အပြာရောင်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအဝေးမှထိန်းချုပ်ရန်ကုဒ်များကိုစီမံပါ။
BlueBorne သည် Android စမတ်ဖုန်းများကိုသာမက၊
ဒီဗီဒီယိုမှာ Armis ဓာတ်ခွဲခန်း ဗွီဒီယိုမျက်နှာပြင်အထက်မှာ၊ ဟက်ကာကြားတာကိုပြတယ်၊ ဘယ်ဘက်အနိမ့်ပိုင်းခွဲ၊ ဟက်ကာမြင်တဲ့အရာတွေ၊ ညာဘက်အောက်ပိုင်းမှာစမတ်နာရီနဲ့ဘာလုပ်သလဲ။
ဒီဗွီဒီယိုအတွက်၊ သုံးတဲ့ကိရိယာဟာထွက်လာတယ် Samsung ကဂီယာ S3.
ကျွန်ုပ်တို့အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း BlueBorne သည် Android စမတ်ဖုန်းများကိုသာမက၊သို့မဟုတ် Apple, Microsoft, Linux စသည့်အခြားကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်ဘဲ Samsung Gear S3 အပါအဝင်စမတ်ကိရိယာအားလုံးနီးပါးအတွက်ဖြစ်သည်။
သင်၏စက်ပစ္စည်းသည် BlueBorne ဖြင့်ကူးစက်ပါကသင်မည်သို့ပင်လုပ်ပါစေဟက်ကာများကမြင်လိမ့်မည်။
ဒီတော့အခုသင်သိပြီ ... သင့်မှာစမတ်ဖုန်းရှိရင် Samsung ရဲ့ Galaxy J5 (2017) နှင့်သင် update ကိုအလိုအလျှောက်မရရှိသေးပါ, ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးအဲဒီလိုလုပ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » Samsung Galaxy J5 (2017) သည် BlueBorne နှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်မှုကိုရရှိသည်
Bitcoins ကို Galaxy S5 နှင့်အတူသတ္တုတွင်းတူးရန်ဆမ်မီသည်
Lightinthebox တွင်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲတော်ကြီး ၇၀% ရှိသည်